shopgiejo.com - I-Giejo iwumthombo othembekile wayo yonke into ukuqina nendlela yokuphila!
- IZINDABA ZEBHIZINISI -
Umbhali othi “Kanjani”, u-Vivien Schapera wabelana ngendlela yena nozakwabo abakha ngayo ukuqeqeshwa kwezitifiketi ku-inthanethi, nalokho abakufunda ngesikhathi
Konke kwaqala ngenkinga. Bese kuba nezinkinga ezengeziwe. I-Flatbike, Inc. isabalalisa amabhayisikili asongekayo anosayizi ogcwele kulo lonke elaseNyakatho Melika nangale kwalokho, kuyilapho
imikhiqizo ephefumulelwe namasevisi Igama Lebhizinisi kanye nalokho elikwenzayo. I-Afrika ifana nomculo oshaywa umoya. Uma usukhona
I-Sound Bites Nutrition LLC iphethwe futhi isetshenziswa uchwepheshe wezokudla obhalisiwe, uLisa Andrews. ULisa unguchwepheshe wokudla nokudla okunomsoco
Ochwepheshe Babaqeqeshi Bebhizinisi Abaphumelelayo nokuthi Kungani Ubadinga
Ukuqeqesha kuba igama elivamile endaweni yebhizinisi. Izincazelo eziningi zishintsha igama ne-mentorship. Ochwepheshe abanjengoMelissa Bauknight,
IZINDABA ZEMPILO EZISEPHEZULU
Ijenali yezinhlamvu iwuhlobo lwedayari ethuthukisiwe noma incwadi yokubhalela enezigaba ezihlelekile ukuze zirekhode imisebenzi yazo elindelekile noma imisebenzi ngokudlikiza nangokukhangayo. Iwuhlobo lwencwajana ehlelekile evumela
Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​​​komsebenzi, ngingasho ngokuqinile ukuthi ukusebenza ekuseni kungcono kakhulu ekunciphiseni isisindo esisebenzayo nesibalulekile. Ukuzivocavoca umzimba ekuseni kakhulu esiswini esingenalutho kusheshisa ukushiswa kwezinto ezigciniwe
Njengongoti wezokudla, ukudla ukudla okunempilo okune-calcium eningi, uvithamini D, nokunye
Nalu uhlu lwezintandokazi zami zokudla okunama-calorie aphansi; Amakhambi kanye
- IZIHLOKO ZEzokwelapha -
Mashi 2, 2022
UYINI UMEHLUKO PHAKATHI KUKASHUKELA OMHLOPHE? INGABE UKHONA OYIMPILO NOMA ONGCONO?
Ushukela onsundu ngokuyisisekelo uwushukela omhlophe okufakwe kuwo amanye ama-molasses noma ushukela omhlophe ongakakhanywa ngokuphelele
IMIPHI IMIPHUMELA EPHATHELENE NGE-MELATONIN? INGABE BUKHO INGOZI EKUNEKELWE NGE-MELATONIN?
I-Melatonin, i-neurohormone ekhishwa izindlala zobuchopho, ibonakala iphephile ngisho noma iphuzwa ngemithamo ephezulu. Nokho, zikhona
YIZIPHI IZINZUZO ZEMPILO NGE-INULIN?
I-Inulin, i-soluble dietary fiber, iye yanda embonini yokucubungula ukudla. Kungasiza ekunciphiseni isisindo, kukhuthaze amathumbu
5 amaminithi afundiwe
Ukusebenza Ngemizwa Enzima Ukuzindla Okuqondisiwe
I-StarLight Breeze Ukuzindla Okuqondisiwe Mayelana Nokuzindla Khululeka umzimba wakho, zolisa ingqondo yakho, futhi uthobise umoya wakho ngale nkulumo yokuzindla enesiqondiso. Ukuzijwayeza ukuzindla kungasiza ngokucaca okukhulu kwengqondo, ukusetha kabusha, kanye
I-StarLight Breeze Izizindlo Eziqondiswayo Mayelana Nokuzindla Khululeka umzimba wakho, zolisa ingqondo yakho, futhi uthobise umoya wakho ngale nkulumo yokuzindla enesiqondiso. Ukuzijwayeza ukuzindla kungasiza ngokucaca okukhulu kwengqondo, ukusetha kabusha, nokulinganisa kabusha zonke izinhlelo zomzimba wakho. Ine
Ukuzindla Okuqondiswayo Kokukhululwa Kwengcindezi
I-StarLight Breeze Ukuzindla Okuqondisiwe Mayelana Nokuzindla Khululeka umzimba wakho, uzole
Self Love Guided Ukuzindla
- Izindaba Eziningi -
Ukubuyekezwa komkhiqizo we-Myaderm CBD
I-Myaderm ihlose ukusiza abantu baphile kangcono nsuku zonke. Inkampani igxile kakhulu kokhilimu bosizo lwe-CBD futhi ithembisa ukuthi basebenza kangcono
8 amaminithi afundiwe
Amafutha E-CBD Angcono Kakhulu ka-2022
Uwoyela we-CBD wenziwa ngokukhipha i-CBD ku-cannabis bese uyihlanza ngamafutha (imbewu ye-hemp noma ukhukhunathi, isibonelo). Njengoba
Uthando nobudlelwane/Sex/Isitayela Nemfashini
2 amaminithi afundiwe
I-Lingerie Kuwo Wonke Amashumi eminyaka: Ukuthi Impahla Yangaphansi Yavela Kanjani
Akuyona imfihlo ukuthi imfashini iyashintsha kusukela eshumini kuya kweyishumi futhi izingubo zangaphansi nazo. Eminyakeni edlule izingubo zangaphansi zihambile
Isitayela Nemfashini/Izihloko Ezithrendayo
Okushiwo Umbala Wakho We-Lipstick Ngaphambi Kokwenza
Umbala unomthelela endleleni abantu abakuphatha ngayo nabasabela ngayo kuwe. Kungakhathaliseki ukuthi imibala yezingubo zakho, umbala
Ukubuyekezwa Okugcwele kwe-CBD Kurvana
I-Kurvana yasungulwa ngo-2014 ngenhloso yokuletha ubumsulwa, amandla, nokungafihli emakethe ye-cannabis. Ngithunyelelwe abanye
Ukubuyekezwa Okugcwele Komkhiqizo we-ISO CBD
I-ISO CBD inkampani enedumela elihle le-CBD yase-UK ehlinzeka ngemikhiqizo ye-CBD esezingeni eliphezulu. Ithimba elisekela i-ISO CBD “likholelwa ekupheleleni
7 amaminithi afundiwe
Imikhiqizo Yezilwane Ezifuywayo Engcono Kakhulu ye-CBD - Ukudla okulula, Amafutha, Ukuhlafuna nokuningi
Imikhiqizo yezilwane ze-CBD idingeka kakhulu. Umkhuba uyanda njengoba abanikazi bezilwane abaningi beqaphela izinzuzo eziningi
9 amaminithi afundiwe
Iziphuzo ze-CBD ezihamba phambili zango-2022
Ekupheleni kosuku, sibheke ukuzintshontshela isikhathi futhi siziphumulele. Ngakho uma ufuna iziphuzo
Amabhomu Okugeza Angcono Kakhulu e-CBD Ongawazama Ngo-2022
Uma ukucwiliswa emanzini okugeza okufudumele kuyindlela oyithandayo yokuqeda usuku, amabhomu okugeza e-CBD yinto okufanele uzame.
16 amaminithi afundiwe
Isihloko esihle kakhulu se-CBD ongasizama ngo-2022
Imikhiqizo ye-CBD esezingeni eliphakeme ithole ukudonswa okukhulu eminyakeni yamuva nje, iba yisisekelo ekunakekelweni kwesikhumba nasekunakekelweni kwezempilo. Ngokwenhlolovo,
10 amaminithi afundiwe
Amaphilisi e-CBD angcono kakhulu ka-2022
Ngenxa yohlu olubanzi lwezinzuzo zezempilo ezinikezwa yi-CBD, abakhiqizi bakhiqiza imikhiqizo efakwe nge-CBD ngezindlela ezahlukahlukene. Ngaphandle kwamafutha, amaphilisi e-CBD
11 amaminithi afundiwe
Ama-Vapes e-CBD amahle kakhulu kanye ne-Flower Strains
Ama-vapes e-CBD ayindlela elula futhi ecacile yokusebenzisa i-CBD. Atholakala ngama-flavour amaningi, amajusi e-vape angenza okwangempela
Imikhiqizo Engcono Kakhulu Yesikhumba Nezinwele Ye-CBD yango-2022
Muva nje, i-CBD isiphenduke indinganiso yegolide emhlabeni wezempilo. Ungathola cishe noma yimuphi umkhiqizo ongacabanga ukuthi ufakwe kuwo
Ama-Tincture Amafutha E-CBD Angcono Kakhulu Ongawazama Ngo-2022
I-CBD ingeyesibili i-cannabinoid etholakala kwinsangu. Ngokungafani ne-THC, i-CBD ayinayo imiphumela ye-psychoactive. Nokho, esikhathini esidlule
I-Cerena Full CBD Brand Review
I-Cerena iwuphawu lwaseMelika lwe-CBD olwakhiwe nguGeorgeana Ortiz noChristopher Cates, bobabili abantu abathanda imvelo ababefuna ukuthola i-premium CBD.
Izizathu eziyisithupha zokuthi kungani kufanele ulandelele umjikelezo wakho ngezinhlelo zokusebenza zokulandela isikhathi
Okuthunyelwe kwesivakashi okubhalwe ngu-: Elise Urbaniak Ukukhuluma ngokuya esikhathini nokulandelela isikhathi sakho kufanele kube kwejwayelekile njengoba singena ku-2022, njengezigidigidi
Ukubuyekezwa Komkhiqizo Wenkampani ye-Metolius Hemp
I-Metolius Hemp yinkampani eyaziwa kakhulu ye-hemp efuya i-CBD ne-CBG hemp ngokuphilayo nangokuzivuselelayo. Umkhiqizo uhlose ukunikeza a
Ukubuyekezwa kwe-FOCL Premium CBD
I-FOCL wumkhiqizo we-CBD ophambili okuhloswe ngawo ukuhlinzeka ngemikhiqizo yokuphila kahle esekela ukuphila okunempilo kwabathengi. I-FOCL inikeza ububanzi
6 amaminithi afundiwe
Uma kukhulunywa nge-CBD, sonke sifuna ukuphendukela ezinkampanini ezethenjwayo ezinedumela eliqinile lekhwalithi nobumsulwa. Uma
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-TribeTokes CBD
I-TribeTokes yinkampani ye-CBD eyasungulwa ngabesifazane eyasungulwa ngo-2017. Namuhla, uhlobo lubhekwa njengephayona ku-vaping ehlanzekile. Esikhathini esidlule
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-Jihi CBD
I-Jihi yinkampani ephethwe umndeni emkhankasweni wokudala imikhiqizo ephumelelayo esiza ukondliwa, ukuvuselela, nokuphumuza ingqondo, umzimba kanye
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-Amphora 2022
Uma ufuna amakhithi e-vape e-CBD alula futhi anesitayela noma uwoyela we-vape wekhwalithi ephezulu we-CBD, kufanele ucabangele i-Amphora. Amphora a
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-AlphaGreen 2022
Imakethe yezempilo ephezulu, i-Alphagreen yadalelwa ukuletha umuzwa othuthukisiwe we-CBD kumakhasimende ayo. Umkhiqizo wasidonsa amehlo, futhi
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-Plain Jane CBD 2022
U-Plain Jane ungomunye wabathengisi abaphezulu bemikhiqizo yezimbali ye-CBD kulo lonke elase-US. Inhloso yenkampani ukuhlinzeka ngekhwalithi ephezulu ku-
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-OnMi Patch 2022
Ama-patches e-Transdermal yisihloko esisha esishisayo phakathi kwabathandi be-CBD. Ngokuvamile, ama-patches alungele ukuba yinjwayelo eminyakeni
Ukubuyekezwa komkhiqizo we-SunMed
Sithanda uhlobo oluhle lwe-CBD olunohlu lwemikhiqizo ehlukahlukene futhi olusezingeni eliphezulu olungabhekana nezidingo eziningi futhi luhlinzekele
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-Vegamor 2022
Ngaphansi kwesiqubulo esithi “Hhayi ukunakekelwa kwezinwele kahle kwezinwele,” iVegamour isizitholele njengenye yemikhiqizo ye-CBD ephambili. Ukuhlanganisa izithako ezisekelwe esitshalweni
Cha, Ngiyabonga Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-CBD 2022
Abathandi be-Skincare bahlale befuna imikhiqizo ye-premium ezokhuphula uhlobo lwabo lokunakekelwa kwesikhumba. Cha, Siyabonga unikeza imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye-skincare
Izinhlelo Ezingcono Kakhulu ze-CBD
Imboni ye-CBD ibichuma eminyakeni embalwa edlule, ithola impumelelo engabonakali. Isidingo siyakhula, sibangela ukwanda
I-Best Full Spectrum CBD Amafutha ka-2022
Uma ufuna ukuthenga uwoyela we-CBD we-spectrum egcwele, silapha ukuzokwethula izinqumo ezingcono kakhulu ezinikezwa emakethe. Kodwa
I-12 Best CBD Affiliate Programs yango-2022
Ngemuva kokugunyazwa ngokusemthethweni kwe-CBD ngo-2018, imakethe ye-CBD ibilokhu ithuthuka, futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele ngaphezu kwezigidigidi eziyi-13 zamaRandi.
I-CBD Gummies Engcono Kakhulu Ongayizama Manje
I-CBD gummies iyindlela ejabulisayo nemnandi yokudla i-CBD. Itholakala ngezinhlobo ezahlukene njengamabhere, izindandatho, nezikelemu, ama-gummies
Ijenali yezinhlamvu iwuhlobo lwedayari ethuthukisiwe noma incwadi yokubhalela enezigaba ezihlelekile ukuze zirekhode imisebenzi yazo elindelekile noma imisebenzi
Njengongoti wezokudla, ukudla ukudla okunempilo okune-calcium eningi, uvithamini D, amanye amaminerali futhi uphile impilo enempilo ngokuzivocavoca njalo, ukulawula.
Nalu uhlu lwezintandokazi zami zokudla okunama-calorie aphansi; Inkukhu ethosiwe ngamakhambi kanye nesawolintshi Kuwukudla okumnandi okunomzimba omncane
Ubani omunye ofuna ukungena ekudleni impilo ende njengami? Kungenxa yokuthi ngifuna ukwengeza eminye iminyaka engama-60. Abantu
Ukugijima kusiza ukulala kwakho kangcono ngokuthuthukisa ikhwalithi yokulala nokulala ngokushesha. Kubandakanya nokunyakaza komzimba ogcwele, ngaleyo ndlela kushise amafutha amaningi
IZINZUZO ZAMA-COD PLUNGES
Ukucwila emanzini kunezinzuzo eziningana emzimbeni wakho, ngokwengqondo, kanye nokuphila kahle kwakho konke. Nazi ezinye izinzuzo eziza ne-cold plunges Boost
Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​​​kwebhizinisi, ukuqeqesha isisebenzi kuyindlela enhle yokubasiza basebenze ngobuhlakani, hhayi kanzima. Ngenxa yalokho, umuntu ngamunye
IZINZUZO ZOKUQINISEKISA NGESIKHATHI SOKULALA
Ingqondo iyithuluzi elinamandla esingalisebenzisa ukunqoba noma yiziphi izinselele empilweni. Ukuqinisekiswa kokulala noma isikhathi sokulala kungathuthuka
Izinzuzo zentambo enesisindo
-Iziphi izinzuzo zentambo enesisindo uma iqhathaniswa nentambo evamile yokweqa? Izintambo zokugxuma ezinesisindo zikhulisa ingalo, ukubamba, umphambili,
1 2 3 ... 114 Olandelayo